पेनाल्टीमा फेरी यसरी चुके मेस्सी ! [भिडियो सहित]
बैशाख २०, २०७८ ST
एजेन्सी – क्याटलान क्लब बार्सिलोनाका लागि यस सिजन पेनाल्टी प्राप्त गरेपनि त्यसमा सफलता हासिल गर्न भने टोलीले निकै संघर्ष गर्नुपरेको छ । आइतबार भ्यालेन्सियाविरुद्ध खेलमा पनि त्यो जारी रहयो ।
कप्तान लिओनेल मेस्सीले भ्यालेन्सियाविरुद्ध प्राप्त पेनाल्टीमा गोल गर्न सकेनन् । गोलरक्षक जास्पर सिलेसनले मेस्सीको प्रहार बचाएका थिए । तर उक्त बचाउबाट फर्केकै बलमा आएको क्रस क्लियर गर्न नसक्दा मेस्सीले गोल गर्न सफल रहे ।
समग्रमा बार्सिलोनाले यस सिजन प्राप्त गरेको १७ पेनाल्टीमा ७ पटक गोल भएको छैन । बार्सिलोना ४१ प्रतिशत पेनाल्टी गोलमा परिणत गर्न सकेन । मेस्सीले मात्र यस सिजन ३ पटक पेनाल्टी चुकाएका छन् । भ्यालेन्सियाविरुद्ध नै लिगको पहिलो लेगमा पेनाल्टीमा चुकेका मेस्सी च्याम्पियन्स लिगमा पेरिस सेन्ट जर्मेन (पिएसजी) विरुद्ध पनि चुकेका थिए ।
मेस्सीबाहेक एन्टोइन ग्रिजमन, ओस्मान डेम्बेले र मार्टिन ब्रेथवेट सबैले १-१ पटक पेनाल्टी मिस गरेका छन् । यी सबैले २ पेनाल्टी लिएकोमा एकमा गोल र अर्को चुकाएका हुन् । मिडफिल्डर मिरालेम प्यानिचले भने लिएको एकमात्र पेनाल्टीमा गोल गर्न सकेनन् ।
आइतबारको खेलमा मेस्सीले पेनाल्टीमा चुकेलगत्तै गोल गरे । त्यसपछि उनले फ्रिकिकमा सिधै गोल गर्दै लिगमा आफ्नो गोल संख्या २८ पुर्याएका छन् । ला लिगाको सर्वाधिक गोलकर्ताको सुचिमा मेस्सी रियल म्याड्रिडका करीम बेन्जेमाभन्दा ७ गोलले अघि छन् ।
प्रकाशित : सोमबार, बैशाख २०, २०७८११:२४
फ्रिकिक गोलमा रोनाल्डोलाई मेस्सीको टक्कर, यस्तो थियो भ्यालेन्सियाविरुद्धको गोल ! [भिडियो सहित]